Taageerayaasha Man City oo madaxa ka feeray Goolhayaha Aston Villa & Kooxda Sky Blue oo raali-gelin ka bixisay dhacdadaas – Gool FM
(Manchester) 23 Maajo 2022. Taageerayaasha kooxda kubadda cagta Manchester City qaarkood ayaa madaxa ka feeray goolahayaha naadiga Aston Villa ee Robin Olsen, markii ay garoonka soo galeen oo ay Sky Blue xaqiijisay inay gacanta ku dhigtay horyaalka Premier League kal ciyaareedkan.
Waxa ay kaamirooyinku qabteen Taageerayaasha Manchester City oo garoonka ku soo cararay, soona buux dhaafiyey cawska garoonka markii ay kooxda Sky Blue xaqiijisay inay ku guuleysatay koobka Premier League oo ay 3-2 ku garaaceen Aston Villa oo ay weliba soo laabasho cajiib ah ku sameeyey.
Xiddigaha labada kooxood ee Man City iyo Aston Villa ayaa durbadiiba garoonka isaga baxay, iyadoo ciidammadda ammaanku ay isku dayeen inay ka celiyaan Taageerayaasha garoonka Soo galay.
Yeelkeede, Goolhaye Olsen ayaa ka soo socda dhanka goolkiisa, waxaana dhowr jeer la arkay iyadoo qaar ka mid ah taageerayaasha Man City ay madaxa ku dhufanayaan, iyadoo xitaa qof ka mid ah ilaaladii la socotay dhulka lagu dhuftay.
Steven Gerrard oo ah tababaraha Aston Villa oo ciyaarta kaddib wax laga weydiiyey dhacdadaas iyo weerarka lagu qaaday goolhayihiisa ayaa ku wajaabay: “Waan eegi doonnaa sida ay xaaladdiisa tahay haatan, balse waxaan qabaa in su’aalahaan aad weydiisaan Pep iyo Man City.”
Dhanka kale Man City ayaa bayaan ka soo saartay arrintan waxaana ay ka bixiyeen raalli-gelin buuxda, iyagoo sheegay inay baaritaan ku sameyn doonaan dhacdadaan ayna tallaabo ka qaadi doonaan taageerayaashii ku kacay falkaas.
“Manchester City waxa ay jeceshay inay si kal iyo laab ah u raaligeliso goolhayaha Aston Villa ee Robin Olsen, kaasoo la feeray kaddib markii ay soo dhamaatay ciyaarta oo taageerayaasha ay garoonka soo galeen, kooxdu waxay bilowday baaritaan deg deg ah, marka la ogaado shaqsiyaadkii ka danbeeyayna waxaa abid laga mamnuuci doonaa garoonka.” ayuu u dhignaa bayaan ka soo baxay Man City.
Si kastaba ha ahaatee, kooxda Aston Villa ayaa lagu soo warramayaa inaysan wax dacwo iyo cabasho ah oo la xiriira dhacdadaan u gudbin doonin maamulka horyaalka Premier League.
Halkaan hoose ka daawo muuqaalka falkii lagula kacay goolhaye Olsen:-